MAMMUT BULLDOG ALIKA FAMPAHALALANA SY SARY - ALIKA
Mammut Bulldog alika fampahalalana sy sary
Mammoths Horse dia manome hery ny Mammut Bulldog amin'ny faha-3 taonany
Ny loha miendrika wedge dia salantsalany amin'ny halavany miaraka amina monona. Izy io dia manana karan-doha lehibe sy voatonona takolaka. Misavoana ny sofina. Ny karazana sofina rehetra dia avela. Ny orona dia mainty, volontany na atiny miloko miankina amin'ny lokony. Maizina ny maso boribory lavalava. Ny vavam-borona dia toradroa, malalaka sy lalina ary misy endrika matanjaka sy manidina manitsy. Izy io dia manana manaikitra ambany na hety ary tsy diso amin'ny nify tapaka. Ny hatoka dia hozatra, somary arched hatrany an-tsorony ka hatrany an-doha, mihidy ary afaka amin'ny hoditra malemilemy amin'ny tendany. Ny tratra dia lalina amin'ny taolan-tehezana mihidy. Ny feny dia salantsalany amin'ny haben'ny hozatra mandroso tsara, ny tonon-taolana misy angotra mety (30 degre eo ho eo), ary ny mirazotra. Somary mitrandraka ny tonon-taolana fa tsy tafahoatra. Ny lamosina dia matanjaka miaraka amina croup somary mitsivalana ary somary ketraka ao ambadiky ny malazo. Aidina ambany ny rambony, mahatratra ny hock, avela amin'ny endriny rehetra, fa ny rambony mahitsy sy tsy misy kink no aleony. Voarindrina ny rambony miforitra na simba, fa ny karazany kosa tsy azo ovaina amin'ny fomba hafa (tsy manongilan-tsofina na manala dewclaw). Ny palitao lava volo dia matevina ary matetika dia mipoitra toy ny volom-borona manodidina ny sofina, ny lamosin'ny tongotra sy ny rambony. Ny loko palitao rehetra dia avela, fa ny alika fotsy kosa dia esorina tsy hiteraka.
Ny Mammut Bulldog dia tsy mivadika, sahy ary tsy matahotra. Matoky tena izy ary manan-tsaina manana toetra mahery. Ity karazana ity dia manana mpamily antonony na avo lenta. Miavaka amin'ny fanatanjahan-tena maro izy io ary mahatonga alika miasa tsara, manomboka amin'ny hakingana ka hatramin'ny fiofanana momba ny fiarovana sy ny sisa. Alika mianakavy mahafinaritra manao namana tsara io. Ity karazana ity dia tsara amin'ny ankizy. Manana fandeferana amin'ny fanaintainana mafy izy io. Ny tompon-trano dia mila maka fomba feno fikirizana sy tsy miova ary feno fitiavana nefa milamina ihany. Raha mahatsapa ny alika ianao malemy saina noho izy , ho lasa maditra izy, satria hino fa anjarany ny mitantana ny trano. Izy ireo dia manao biby fiompy mahafinaritra ho an'ny tompona assertive iza no mampiseho ny habetsaky ny mpitarika . Anarana serasera olombelona amin'ny canine tena ilaina.
Hahavony: 17 - 21 santimetatra (45 - 55 cm)
Lanja: 40 - 60 pounds (18 - 27 kg)
amerikana taloha amerikana bulldog mix
fampahalalana momba ny alika pyrène tsara
Ny Mammut Bulldog dia mipetraka ao an-trano akaiky indrindra ny fianakaviany. Tsy toy ny karazana Bulldogs maro hafa, ny Mammut Bulldog dia mahazaka hafanana marobe sy mafana kokoa.
Ity karazana ity dia mila raisina a mandeha isan'andro . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ireo alika ireo dia manao tsara indrindra amin'ny fianakaviana mavitrika ary manao alika miasa.
9 ka hatramin'ny 11 taona eo ho eo
Ny palitao fohy dia mora taovolony. Borosio ary borosy amin'ny borosy mafy volo, ary mandro raha tsy ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Mammut Bulldog dia fialamboly an'ny bulldog miasa efa ela niasana tamin'ny taona 1800. Ny andro maoderina Mammut dia ra any Alemana tamin'ny voalohany misy Bulldog 100% ao anatin'izany American Bulldog , Bandogge , English Bulldog , Olde English Bulldogge SY Bullmastiff .
Hardtails Black Shuck the Mammut Bulldog puppy amin'ny 10 herinandro
sary omby omby orona manga
Mammoths Horse Power ny Mammut Bulldog amin'ny 3 taona miasa amin'ny fiofanana momba ny fiarovana
sarin'ny alika mpanjaka charles
husky fotsy siberia fotsy lehibe
orsa mainty palitao shar pei